Happy Wheels tonga amin'ny Android miaraka amin'ny fizika mahafinaritra amin'ny zavatra | Androidsis
Happy Wheels dia lalao fizika zava-baovao tena mahafinaritra izay itantananay ilay mahery fo nitaingina ilay fiarany manokana niaraka tamin'ny kodiarana tokana.
Lalao tena mifototra amin'ny fizika ny zavatra sy ny fomba andao hihomehy kelikely rehefa mahita ho an'ity lehilahy ity haka fakana sary tsara raha manandrana mandalo ny ambaratonga rehetra izahay, samy noforonina tsara izy ireo, ary misy fikitika be amin'ny lafiny fahitana rehetra.
1 Fizika objectif Wheels
2 Mekanisma isan-karazany amin'ny Happy Wheels
3 Mamoha litera misimisy kokoa
Fizika objectif Wheels
Ary tsy hisy ny tsy fahampian'ny ra raha diso ny iray amin'ireny manosika antsika ireo sehatra manainga. Eto no misy ny antsipirian'ny mpikambana tsirairay ao amin'ny vatan'ny mpihetsiketsika, mba hahafahantsika manohy ny dia ataontsika nefa tsy misy tongotra na sandry.
Manana an'io lafiny feno rà io izy izay tsy hijanona esory ny fahasoavana amin'ny resaka famindrana ity lehilahy ity manerana ny sehatra. Tena fototra ny fanaraha-maso ary manana ny fitsambikinana amin'ny lafiny iray isika ary ny fanaraha-maso ny horonana. Izany dia milaza fa ny fizika zavatra dia misy ihany koa amin'ny hafainganam-pandeha azo raisina, koa mitandrema satria rehefa mahatratra betsaka ianao dia ho sarotra kokoa ny mamaky azy.
Ity no fomba ahazoantsika lalao lampihazo tena liana hahafenoana ny famolavolana ny haavony rafitra samihafa izay manasarotra ny raharaha amin'ny fotoana maro. Saingy io no resahina rehefa te-hilalao titre mahafinaritra isika ary misy ny kisendrasendra amin'ny fotoana maro.
Mekanisma isan-karazany amin'ny Happy Wheels
Araka ny efa nolazainay, ny mekanisma ao amin'ny Happy Wheels dia iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ireo ambaratonga namboarina ireo mba hanasarotana ny raharaha. Ho hitantsika amin'ny karazan-karazany rehetra izy ireo ary ny sasany ho sarotra be amin'ny fampitana azy ireo. IREO sprockets izay mihetsika ary satria tsy haintsika ny mahay mahay dia ho hitantsika ilay mpihetsiketsika miaraka amin'ny saron-tava nosoratany tamin'ny tany.
Tsy misy tsy fahampiana ihany koa ny toeram-pitrandrahana, baolina fanaovana gym, harpoons ary maro hafa izay atolotray anao ho fantatra. sokajy dia ambaratonga 60 tsy manam-paharoa nisy azy ny fanoloran-tena rehetra mba hahasitranantsika ny lalao tsirairay.
Toy izao no atolotra ny lalao iray izay fahafinaretana hilalaovana ary mihetsika tanteraka. Tsy fohy mihitsy ny haavony ary mila mitandrina tsara isika amin'ny fomba hisehoan'ny zava-drehetra. Raha milaza isika fa avy amin'ny maha-izy azy eo amin'ny tranokalanao an-tserasera ary an-tapitrisany no nilalao an'io, azontsika atao ny mahatakatra ny fomba nahavitany tamin'ny finday mba hahafahantsika mankafy anaram-boninahitra an-tserasera iray manontolo.
Mamoha litera misimisy kokoa
Raha aloha hanana isika karazana skateboard kodiarana iray, hanokatra fiara samihafa ianao ho toy ny tena mahaliana raha ny ray sy ny zanany tsy tompon'andraikitra no mahery fo amin'ny lalao tsirairay.
Happy Wheels dia lalao voarindra tsara, na dia eo aza ny toerana misy azy miavaka indrindra dia ireo mekanisma ary ilay fizika zavatra izay miaraka mamorona fotoana mampihomehy. Io no tadiavintsika rehefa tonga amin'ireo fotoana sendra ireo ary indrindra rehefa niasa ny fizika mba hahatonga azy ho tena misy; ary hisy fotoana maro tena azo tanterahina, saingy tsy mampihemotra ny traikefa rehetra omen'ny Happy Wheels.
Happy Wheels dia tonga amin'ny Android mandray ny tehaka amin'ny mpilalao marobe ary efa manana vondron'olona mpilalao miteny avo momba azy. Maimaimpoana izy io, noho izany dia ho afaka mankafy ny lalaoo ianao, na dia be dokambarotra aza, na eo amin'ny efijery na ireo dokambarotra maharitra fotoana maro. Raha afaka manilika ireo doka ireo ianao dia hanana fotoana mahafinaritra miaraka amin'ilay mpihetsiketsika sy ny fombany manokana handehanana amin'ireo ambaratonga mihoatra ny 60 ireo. Mandao anao izahay miaraka amin'ny Cannon Shot, lohateny iray hafa izay ny fizika ny zavatra no mpandray anjara amin'ny lalao mihoatra ny mahaliana avy amin'ny finday.
Sambatra ny kodiarana
Fizika zavatra tena tsara
Haavo haingon-tanana 60
Rà mandriaka kely
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Miala voly miaraka amin'ny fizika zavatra platformer Happy Wheels, lalaovin'ny olona an-tapitrisany